कोरोनामुक्त भएका बालबालिकालाई एमआईएस (सी) को खतरा - Candles Khabar
गृहपृष्ठ कोरोनामुक्त भएका बालबालिकालाई एमआईएस (सी) को खतरा
कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) सङ्क्रमण मुक्त भएका बालबालिकामा पछिल्लो समय मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन अर्थात् एमआईएस (सी) भएर अस्पताल आउने क्रम बढ्न थालेको बाल चिकित्सकहरूले बताएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भएका १९ वर्षमुनि उमेर समूहलाई एमआईएस (सी) लाग्छ । कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएको दुईदेखि चार हप्ताभित्र यो रोग देखिनसक्ने कान्ति बाल अस्पतालका पेडियाट्रिक विभागका प्रमुख बालरोग विशेषज्ञ प्रा.डा. अजित रायमाझी बताउँछन् । यद्यपि कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएको एकदेखि तीन महिनासम्म पनि बालबालिकालाई एमआईएस (सी) देखिन्छ ।
एमआईएस (सी) लागेर गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भई उपचारका क्रममा बालबालिकाको मृत्युसमेत भएको छ ।
एमआईएस (सी) रोग कोरोना सङ्क्रमणकै कारण हुने गर्छ । तर कम बालबालिकालाई कोरोना सङ्क्रमण भएकै बेलामा पनि एमआईएस (सी) लाग्न सक्नेसमेत बालरोग विशेषज्ञ डा. रायमाझीले बताए ।
कोरोनामुक्त भएका बालबालिकामा उचित ध्यान पु¥याउन नसक्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर खालको समस्या देखापर्ने उनले सुनाए । यो गम्भीर खालको रोग भएकाले यसबारे सचेत रहन अति आवश्यक भएको डा. रायमाझी ठान्छन् ।
पछिल्लो समय कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थाहा पाईकन नै एमआईएस (सी) रोग लाग्ने गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमण लक्षणविहीन देखिएपछि थाहा नपाईकन नै निको हुन गर्छ । तर बालबालिकालाई सङ्क्रमण भएको पत्तो नपाई पनि एमआईएस (सी) को लक्षण देखिने गरेको डा. रायमाझी बताउँछन् ।
एमआईएस (सी) पुष्टि भएपछि कोरोना परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखाउने उनले सुनाए । कोभिडसँग लड्नका लागि शरीरले प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा एमआईएस (सी) रोग लाग्ने उनले बताए । शरीरले भाइरसप्रति प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा प्रतिक्रिया नदिने र ज्यादै प्रक्रिया दिँदा एमआईएस (सी) हुन सक्ने डा. रायमाझीले सुनाए ।
भाइरसप्रति शरीरले तीन खालका प्रतिक्रिया देखाउँछ । भाइरस शरीरमा हुँदा एउटाले सामान्य प्रतिक्रिया देखाउँछ, अर्कोले प्रतिक्रिया नै नदेखाउने हुन्छ र शरीरले एकदमै धेरै प्रतिक्रिया दिने उनले बताए ।
कोरोना सङ्क्रमण निको भएपछि भाइरसले शरीरमा साधारण प्रतिक्रिया देखाउनुपर्ने सट्टामा प्रतिरक्षा प्रणालीले अत्यधिक प्रतिक्रिया देखाएर शरीरभरी गलत सूचना फिजाउँदा एमआईएस (सी) हुने वातावरण सिर्जना गर्ने डा. रायमाझीको भनाइ छ । त्यही भएर नै कोभिड सङ्क्रमण हुनेबित्तिकै यो रोग शरीरमा देखापर्दैन ।
एमआईएस (सी) लाग्दा देखिने लक्षणहरू यस्ता छन् ।
–दुई तीन दिनसम्म उच्च ज्वरो आउने ।
–आँखा रातो भएर पक्ने ।
–हातखुट्टा चिसा हुने, नसाहरू खोज्दा नभेटिने ।
–मुटुको धड्कन बढ्ने ।
–हात, खुट्टा, शरीर लगायतका विभिन्न ठाउँमा काला डाबरहरू आउने ।
–नाक वा शरीरको कुनै भागबाट रगत बग्ने
–पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने, बान्ता आउने ।
–कोभिड मुक्त भएपछि एमआईएस (सी) भएर जटिल अवस्था जटिल नै सिर्जना भएको बेलामा जिब्रो, ओठ सुन्निने ।
–श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने, पिसाब फेर्न पनि गाह्रो हुने ।
–हातखुट्टा सुन्निने ।
कोभिड मुक्त भएपछि देखिने एमआईएस (सी) को उपचार महँगो पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । यो रोग लागेर अस्पताल पु¥याउन ढिला भएमा बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्न सक्नेसमेत डा. रायमाझीले सुनाए । मे २०२० कालासाकी जस्तो लक्षणदेखिएका बाल रोगी आएपछि जाँच तथा परीक्षण गर्दा एमआईएस (सी) भन्न पहिचान भएको उनले सुनाए । त्यसपछि कान्ति बाल अस्पतालले यस रोगको बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सेप्टेम्बरमा रिपोर्टिङ गरेको उनले बताए । ‘जाँच तथा परीक्षण क्रममा कोभिड मुक्त भएका बालबालिकालाई एमआईएस (सी) लागेको देखियो भनेर प्रकाशन ग¥यौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि धेरै अस्पतालमा यो रोगका बिरामीको जाँच, पहिचान उपचार गर्न सुरु गरिएको छ ।’
त्यसपछि लक्षणदेखिएका बालबालिकालाई एमआईएस (सी) को शङ्का गर्न थालिएको हो । शङ्काका आधारमा अस्पतालमा बिरामीलाई समयमै ल्याउँदा उपचार पाएर निको भएर घर जान थालेको उनको भनाइ छ । कान्ति बाल अस्पतालमा हप्तामा १५ देखि १७ जना एमआईएस (सी) आशङ्का भएर आउने गरेको उनले जानकारी दिए ।
बालबालिकामा एमआईएस (सी)को आशङ्का लाग्ने बित्तिकै अस्पताल लैजानुपर्छ । यो नवजात शिशुलाई समेत लाग्छ । त्यसैले शिशु तथा ससाना बालबालिका, किशोर किशोरीहरूले तत्काल थाहा पाउँदैनन् । कोरोना मुक्त भएका बालबालिकालाई पुनः स्वास्थ्यमा समस्या देखिएमा अभिभावकले ख्याल गर्न अत्यन्त जरुरी भएको उनले सुनाए । यो रोग कम उमेर समूहका नवजात शिशु, बालबालिका र किशोर किशोरीलाई देखापर्ने भएकाले कोरोना भाइरस मुक्त भएका उनीहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखिएमा अभिभावक धेरै सचेत हुनुपर्ने बालरोग विशेषज्ञ डा. रायमाझीको सुझाव छ ।
प्रकाशित समय २३:०० बजे
पछिल्लाे - स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक छन् यसरी मिसाएर खाइने खाना, के भन्छ आयुर्वेद ?
अघिल्लाे - लुम्बिनी प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन, मन्त्रालयको कामकाज शुरु